I-China Oversize Square Anti blue Light Glasses Frame Yabesifazane ifektri nabakhiqizi |I-D&L
I-Oversize Square Anti blue Glasses Glasses Frame Yabesifazane
I-DLO1916 I-Vintage New Retro Black Ukusetshenziswa kwezibuko ezikhanyayo eziluhlaza okwesibhakabhaka kuzibuko zelanga zekhompyutha
I-Square Optical Glasses Frames Yabesifazane, I-Oversized Clear Clear Lens Prescription Umklami Womkhiqizo Wezibuko Zamehlo Eyewear
Ukulimaza Nokuvikelwa Kokukhanya Okuluhlaza okwesibhakabhaka
Iyiphi ingozi eyenza ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka?Ukukhanya okuluhlaza kungangena ngokuqondile kwilensi futhi kufinyelele ku-retina ye-fundus.Umonakalo esweni elinelanga uphindwe ka-10 kunokukhanya okuvamile.
Itholakala enanini elikhulu lama-computer monitors, amalambu e-fluorescent, omakhalekhukhwini, imikhiqizo yedijithali, izikrini zokubonisa, i-LED, izincwadi zokubhalela nokunye ukukhanya, kanye nezibani zelanga (izibani ze-fluorescent, izibani zothingo, izibani ze-LED, izibani zasesiteji, njll.) yonke indawo efihliwe emthunzini wawo.
Izibuko eziluhlaza okwesibhakabhaka zinganciphisa ngempumelelo umonakalo oqhubekayo wokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka emehlweni.Ngokutholwa okuqhathaniswayo kwe-spectral analyzer ephathekayo, ukushuba kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhishwa isikrini sikamakhalekhukhwini kucindezelwe ngempumelelo ngemva kokusebenzisa izibuko eziphikisana nokuluhlaza okwesibhakabhaka, kanye nokulimala kokukhanya okuluhlaza okulimazayo emehlweni kuye kwancishiswa.
Izibuko eziluhlaza okwesibhakabhaka ngokuyinhloko zibonisa ukukhanya okuluhlaza okulimazayo ngokumboza phezu kwamalensi, noma zimunce ukukhanya okuluhlaza okulimazayo ngokungeza into ephikisana nohlaza okwesibhakabhaka ezintweni eziyisisekelo zamalensi, ngaleyo ndlela zifinyelele umgoqo wokukhanya okuluhlaza okulimazayo namehlo avikelayo.
Amafreyimu okukhanya aluhlaza okwesibhakabhaka asiza ukuvikela ukucindezelwa kwamehlo.
ISIkwele ESIKHULU KAKHULU SOKUKHANYA OKUBLUE OKUVIMBELA IZINHLOSI ISO, CHAMPAGNE
Izibuko eziluhlaza okwesibhakabhaka zingahlukanisa i-UV nemisebe futhi zingahlunga okuluhlaza okwesibhakabhaka, futhi zinciphisa ukukhathala kwamehlo ekhanda elibuhlungu ledijithali ukuze ulale kangcono.
I-DL Blue Light Blocking Glasses Vimba ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuqinile, Okudizayinelwe Impilo Ematasatasa Yedijithali.Isitayela Sezingilazi Eziyisikwele Ezemfashini Ikhwalithi Enhle Uhlaka Olusebenzayo Nomklamo Wemfashini, lukwenza ube nesitayela kakhudlwana.THUTHUKISA ISIKHALAZO SAKHO SOKUBONAKALA
Ubukhulu bomkhiqizo - Ububanzi Belensi: 62MM(2.44'') Ubude Belensi: 60MM(2.36'') I-Nose Bridge: 20MM(0.79'') Ubude Bozimele: 142MM(5.59'') Ubude Bethempeli: 141MM(5.55'').
Idizayini ehlukile: Lolu hlaka lweso lekati lisebenzisa idizayini enethezekile yephedi yekhala ukuze kwehlise ingcindezi kubhuloho lakho lekhala ngaphandle kokushiya ama-indent.Nokwakheka kobuso bakho kwalungiswa ngohlaka lweso lekati;pearl inlay izingalo, ubukeka eyingqayizivele kakhudlwana futhi yizicukuthwane, ungase futhi ube muhle futhi uzethemba ugqoke izibuko ukukhanya blue.
Izikhathi ezisebenzayo: Lezi zibuko ezikhanyayo eziluhlaza zifaneleka kakhulu ukuhamba, ukushayela, ukugqoka kwansuku zonke, ukuhamba eholidini nezinye izikhathi.Futhi kuyisipho esiwusizo somndeni, imibhangqwana nabangane.
Izibuko ze-Blue Light Clear Frame.Ilungele abadlali bamageyimu noma abantu abasebenza amahora amade kukhompuyutha.
Izibuko nazo zingagqokwa ukuze zisetshenziswe nsuku zonke!
Okwedlule: Umyalelo wekati weso elibomvu izibuko zokukhanya eziluhlaza okwesibhakabhaka uhhafu wokufunda uhlaka lwezibuko
Izibuko eziyisicaba eziyisiyingi ezikhanyayo eziluhlaza okwesibhakabhaka
Izibuko ezi-anti-blue zomuntu omdala